Fifandraisana: Ny Effect Coolidge ary mitady vaovao | Valin'ny Fanamarinana
Home fifandraisana The Coolidge Effect
Misy lesoka amin'ny tetikadin'ny natiora, bibikely ao amin'ny rafitra, raha tianao. Ny fipetrahana miaraka amin'ilay olona voalohany tiantsika ary mifamatotra dia tsy hanampy amin'ny fanaparitahana ny fototaraontsika. Ny fanaparitahana fototarazo no laharam-pahamehana laharam-pahamehana 1. Ny fahasambarantsika manokana dia tsy hita ao amin'ny drafitra. Saika saika ny biby mampinono rehetra, anisan'izany isika olombelona dia manana rafitra efa voaorina ary antsoin'ny mpahay siansa The Coolidge Effect. Izy io dia miasa mba hahatonga antsika hikatsaka mpiara-miombom-bady 'novelahy' rehefa vita ny asam-pamokarana ataontsika. Izy io dia miasa fanolorana fandeferanaZavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza | Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa tsy dia mahafa-po loatra ny fisian'ny atidoha. Rehefa mandeha ny fotoana, dia kely dia kely ny faniriana mitovy amin'ny mpiara-miaina.
Eto no heverina fa niavian'ilay teny hoe "The Coolidge Effect". Naseho [misaraka] ny filoham-pirenena sy Ramatoa Coolidge nanodidina ny toeram-piompiana andrana nataon'ny governemanta. Rehefa [Ramatoa. Coolidge] tonga teo amin'ny tokotanin'ny akoho dia hitany fa nisy akoho nanambady matetika. Nanontaniany ny mpanatrika hoe impiry izany no nitranga ary nilazana hoe: "Im-polony isan'andro." Hoy Ramatoa Coolidge, "Lazao amin'ny filoha izany rehefa tonga izy." Rehefa nilazana ny Filoham-pirenena dia nanontany izy hoe: "Mitovy akoho akoho isaky ny mandeha?" Ny valiny dia, "Oh, tsia, Andriamatoa Filoha, akoho hafa isan-karazany." Filoham-pirenena: “Lazao an-dRamatoa Coolidge izany.”
Fantatry ny tantsaha ihany koa izany satria ny ombilahy hifanambady omby iray isaky ny vanim-potoana fotsiny. Hikaroka omby vaovao any an-tsaha izy ireo mba hamelona ny omby manontolo. Ity programa taloha ity hanaparitahana gén maro araka izay azo atao, dia tsy mifanaraka amin'ny fiainantsika sivily ankehitriny. Tianay ny mifamatotra sy mijanona ho mpanolo-tena raha mbola azo atao. Ny fivavahana sy ny fiarahamonina dia nampiasa tetika isan-karazany mba hamiliana ity hadisoana ity - mamela vady bebe kokoa ny lehilahy, manambady azy ireo tanora ary mamporisika fianakaviana lehibe hanao izay hahasadaikatra azy ireo, ary hampahiratina ny masim-bavy sns.
Io lesoka io eo amin'ny biolojika, ny vokatra Coolidge, no namela ny indostrian'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet hamokatra holatra ho lasa orinasa amina miliara dolara. Raha vantany vao 'zezika ny voky' ny olona iray toa firaisana ara-nofo vonona, dia hijanona izy ireo. Mitranga izany na dia sarin'ny iray aza. Avy eo ny ati-doha dia tsy mamokatra dopamine "manaraka azy" kely kokoa ary mihaza manodidina ny fotoana ahazoana zezika vaovao. Miaraka amin'ny horonantsary mamoa fady manodidina ny 10 tapitrisa eo ho eo any Angletera isan'andro, tsy misy tsy fahampiana ireo vady toa vonona. Izany rehetra izany dia mitohy amin'ny ambaratonga tsy mahatsiaro tena fa misy fiatraikany amin'ny fitondran-tena isan'andro.
Ny vaovao tsara dia hoe tsy voatery ho tratry ny Coolidge Effect isika. Manana saina isika olombelona rehefa mametraka ny saintsika. Amin'ny fianarana hampihenana ny vokatry ny dopamine loatra ao amin'ny atidoha ary ny fanamafisana ny fandanjana amin'ny oxytocine bebe kokoa noho izany dia mampihena ny haavon'ny haongana koa, hamporisika fifamatorana bebe kokoa sy fifandraisana isika. Manam-pahatokisana ireny ary manampy antsika hamolavola ny tsirairay sy ny tsirairay. Ho fampahalalana misimisy kokoa momba izany dia mamporisika am-pahamendrehana ity tranonkala ity www.reuniting.info.
<< Fitiavana toy ny filan'ny nofo Manala ny filan'ny nofo >>